FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA GOLDEN PEI - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Golden Pei
Alika Shar-Pei / Golden Retriever mifangaro alika
Jaxon the Sinoa Shar-Pei / Golden Retriever afangaro alika kely mandritra ny 7 volana
Ny alika volamena dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Sinoa Shar-Pei ary ny Golden Retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Jaxon the Sinoa Shar-Pei / Golden Retriever afangaroy alika kely amin'ny 11 herinandro
'Trixie dia vehivavy, Shar-Pei / Retriever, 2 volana. Roa andro fotsiny no nanaovantsika azy ary tsy afaka milaza an-tsaina ny fiainana talohan'ny nahatongavany.
'Avy amina mpiompy ao an-toerana any amin'ny faritra Chicago izy ary avy amin'ny ra mandriaka amin'ny lafiny roa amin'ny taranany. Araka ny hitanao eo amin'ny sary, dia matanjaka kokoa ao aminy i Shar-Pei.
'Mahagaga ny toetrany. Nataony ho mpikambana mahafinaritra ao amin'ny fianakaviana izy tao anatin'ny minitra vitsy taorian'ny nahatongavany. Toa efa vaky trano izy satria hampahafantariny anay rehefa vonona ny hivoaka izy ary mbola tsy nanao fahadisoana ao anaty trano. Izy dia be fitiavana, be fitiavana ary tena manan-tsaina ary gaga aho fa vao 2 ½ volana izy satria mitondra tena toy ny hoe nanana fiofanana ofisialy ary ho antitra kokoa.
'Manaraka ny ombelahin-tongotro izy ary tsy ilaina ny fehy an-tongotra . Raha ny marina dia nasehony mazava fa tsy tiany leash ary hijanona tsy handeha intsony rehefa apetrako aminy izany. Raha vantany vao esoriko io, dia eo amin'ny voditongony aho. Rehefa mandeha aho dia toy izany koa izy, rehefa mijanona aho, dia toy izany koa izy, na inona na inona zava-mitranga manodidina antsika. Tsy variana mora foana izy ary mora ny mitazona ny sainy. Tsy matahotra ireo fahitana sy feo vaovao ao amin'ny tontolony vaovao izy ary nilaza mazava fa mikasa ny hilalao isaky ny santimetatra toradroa ny velarantaninay ½-hektara.
'Efa manana kilalao' binkie 'ankafiziny izy ary tiany rehefa manandrana manaisotra azy aminy ianao. Rehefa esoriny lavitra anao io dia mivoaka tsy tapaka toy ny mpanjakavavy mpandresy izy miaraka amina ‘WOOF’ mandresy handroaka ilay teboka mody.
'Ao amin'ny sary etsy ambony dia hitanao fa manana fijoroana matanjaka izy ary ny diany dia ny trot hita amin'ny alika fampisehoana maro. Mandeha izy ary mijoro amin'ny fahatokisan-tena.
'Ny maha-alika kely mahafatifaty azy ary ny palitaony fuzzy sy ny taviny ambany dia nahatonga azy ho be fitiavana. Rehefa mandry izy dia misidina ny jowl ary miandrandra anao izy, te-hitomany fotsiny ianao ary tsy afaka ny tsy handeha awwwww!
'Mbola tsy nahita toetra ratsy isika, fotoana fohy no niarahany tamintsika, saingy manana toetra tsara marobe amin'ny karazany roa izy ary hanohizantsika hanamafy ireo ary raha misy ny ratsy miseho dia hosaroninay izy ireo . Raha ny zavatra hitako nofaritana ho an'ny karazany roa, ity alika ity dia manana ny tsara indrindra amin'ny angady.
'Manantena ny handany ny dia miaraka amin'ny mpikambana vaovao indrindra amin'ny fianakavianay aho.'
Trixie ilay vehivavy Shar-Pei / Golden Retriever mifangaro alika kely (Golden Pei) amin'ny 2 1/2 volana
zanak'ondry jack russell rat terrier
St Bernard Terre-Neuve Pyrénées lehibe Mix
alika kely feno sôkôla feno rà